MYUTSAWMYIT : ကချင်ပြည်နယ်သတင်း: 2013-03-10
Created on Saturday, 16 March 2013 (Eleven Media Group)
ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့နောက်ပိုင်းတွင် မိုဘိုင်းဖုန်းဆင်းကတ်များကို ငွေကျပ် ထောင်ဂဏန်းဝန်းကျင်ဖြင့် ရောင်းချမည်ဟု နိုင်ငံတော်သမ္မတ ပြောရေး ဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးရဲထွဋ်က မတ်လ ၁၆ ရက်နေ့တွင် Eleven Media Group သို့ အတည်ပြု ပြောကြားခဲ့သည်။
နိုင်ငံတော်သမ္မတ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးရဲထွဋ်က "ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးစိုးသိန်းပြောတဲ့ 'မိုဘိုင်းဖုန်း ဆင်းကဒ်တွေကို ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့မှာ စတင် ရောင်းချပေးမှာ မှန်ပါတယ်။ မိုဘိုင်းဖုန်း ဆင်းကဒ်တွေကို တကယ် ရောင်းတဲ့အခါ အခုပြောနေကြတဲ့ ကျပ်နှစ်သောင်းဆိုတာထက် အများ ကြီး လျော့နည်းတဲ့ဈေးနဲ့ ရောင်းမှာပါ။ ထောင်ဂဏန်းမျှသာ ဖြစ်ပါလိမ့် မယ်' ဆိုတာကို ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးစိုးသိန်းကို မေးတဲ့အခါ အတည် ပြုတဲ့အတွက် အခြား မီဒီယာတွေကိုလည်း အဲဒီအတိုင်း ကျွန်တော် ထပ် ဖော်ပြပေးလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်" ဟု Eleven Media Group ၏ မေးမြန်း ချက်ကို ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့သည်။
at 3/16/2013 10:40:00 PM No comments:
at 3/16/2013 02:01:00 PM No comments:
at 3/15/2013 08:33:00 PM No comments:
ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ဘန်ကီမွန်း က မြန်မာ အစိုးရ၏ ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေး ကော်မတီနှင့် ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ (KIO) တို့အကြား မတ်လ ၁၁ ရက်နေ့က တရုတ်နိုင်ငံ၊ ရွှေလီမြို့တွင် ကျင်းပခဲ့သည့် ဆွေးနွေးပွဲအား ကြိုဆိုကြောင်း မတ်လ ၁၄ ရက်နေ့က ကြေညာချက်တရပ် ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။
“အစိုးရနှင့် KIO အား အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး သဘောတူညီချက် ရရှိရန်နှင့် လွတ်လပ်ရေး ရရှိပြီးသည့် အချိန်မှစ၍ မြန်မာနိုင်ငံ တဝှမ်းလုံး ပထမဆုံးအကြိမ် ငြိမ်းချမ်းရေးရရှိနိုင်ရန် အလို့ငှာ မျှတ၍ စစ်မှန်ကာ ကြာရှည်ခံမည့် အဖြေ တခု ထုတ်နိုင်ရေးအတွက် ကြိုးပမ်းမှုများကို ပိုမို အရှိန်အဟုန်မြှင့် ဆောင်ရွက်ကြရန် ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူး ချုပ်က အားပေး တိုက်တွန်းလိုက်ပါသည်” ဟု ကြေညာချက်ထဲတွင် ရေးသား ထားသည်။
at 3/15/2013 10:26:00 AM No comments:
at 3/15/2013 10:25:00 AM No comments:
at 3/15/2013 10:22:00 AM No comments:
2013 March 14, ကချင်သတင်းဌာန
ယနေ့ မတ်လ (၁၄) ရက်နေ့ကျရောက်သည့် ‘နိုင်ငံတကာ မြစ်ချောင်း များဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှု အထိန်းအမှတ်နေ့’ တွင် ကချင်ပြည်နယ်အခြေ စိုက်လူထုအခြေပြုဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ဦးဆောင်၍ မြစ်ဆုံဒေသခံလူထုများက ဧရာဝတီမြစ်ကို ဖျက်ဆီးနေသော စီမံကိန်းများရပ်ဆိုင်းပေးရန် တောင်း ဆိုမှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ဧရာဝတီမြစ်ပေါ်တွင်တည်ဆောက်နေသော မြစ်ဆုံရေကာတာစီမံကိန်း အပါအ၀င် အခြားသော ရေကာတာ စီမံကိန်း (၇) ခုအား လုံးဝရပ်တန့် ရေး နှင့် ဧရာဝတီမြစ်ကို ဖျက်ဆီးနေသော မြစ်တလျှောက်ရွှေတူးဖော်ရေး လုပ်ငန်းများအားလုံး ရပ်တန့်ရေးနှင့် ရေကာတာစီမံကိန်းကြောင့် ပြောင်း ရွှေ့ ခံရွာသားများ မိမိတို့ရွာနှင့် လယ်ယာမြေများ ပြန်လည်ရရှိကာ လုပ်ကိုင်စားသောက်နိုင်ရန် တောင်းဆိုမှုများပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
at 3/15/2013 10:21:00 AM No comments:
ဧရာဝတီနှင့် သံလွင်မြစ်များပေါ်တွင် တည်ဆောက်လျက်ရှိသော ရေကာ တာ စီမံကိန်းကြီးများ ရပ်ဆိုင်းရေးလှုပ်ရှားမှုကို ယနေ့ ကျရောက်သော နိုင်ငံတကာ မြစ်ချောင်းများ ဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားမှု အထိမ်းအမှတ်နေ့တွင် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် အဖွဲ့များနှင့် သက်ဆိုင် ရာ ဒေသခံများက ကျင်းပကြကြောင်း စုံစမ်းသိရှိရသည်။
ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ဆုံဒေသတွင် ဒေသခံ ၁၀၀ ခန့်နှင့် ကချင်ပြည်နယ် အခြေစိုက် လူထုအခြေပြု ဖွံဖြိုးရေးအဖွဲ့(MRJ) တို့ ပူးပေါင်း ၍ ဧရာဝတီ မြစ်ဆုံစီမံကိန်း အပါအဝင် မေခနှင့် မေလိခ မြစ်ပေါ်တွင်တည်ရှိသော ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်း ၇ ခုအား ရပ်တန့်ရေး၊ ယင်းမြစ်ချောင်းများ ပေါ်က ရွှေတူးဖော်ရေး လုပ်ငန်းများ
at 3/14/2013 09:20:00 PM No comments:
at 3/14/2013 09:19:00 PM No comments:
at 3/14/2013 09:18:00 PM No comments:
ကချင်ပြည်နယ်တွင်း ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားမှုနှင့်ပတ်သက်၍ မြန်မာအစိုးရနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရာမှပြန်လာကြသော ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ (KIO) ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့များကို လိုင်ဇာရှိ ပြည်သူလူထုများက ယမန်နေ့ညနေတွင် နယ်စပ်တံတား တစ်လျှောက်ဝမ်းသာအား ရကြို ဆိုခဲ့ကြသည်။
at 3/14/2013 09:17:00 PM No comments:
မြန်မာနိုင်ငံ တဝှမ်း တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း စာမေးပွဲ များကို ယနေ့ မတ်လ ၁၃ ရက်နေ့တွင် စတင် ဖြေဆိုနေပြီ ဖြစ်သော် လည်း ကချင်လွတ်လပ်ရေး အဖွဲ့ KIO ထိန်းချုပ် နယ်မြေများမှ ၁၀ တန်း ကျောင်းသူ/သားများ အတွက်မူ လာမည့် ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့မှ ဖြေဆိုကြ မည် ဖြစ်သည်။
မကြာသေးမီက တိုက်ပွဲများနှင့် ပစ်ခတ်မှုများကြောင့် ကျောင်းစာသင် ရက်များ ပျက်ခဲ့ရပြီး သင်ရိုးကုန်ရန် အချိန်နောက်ကျခဲ့၍ စာမေးပွဲလည်း နောက်ကျ စစ်ရကြောင်း KIO ပညာရေးဌာနမှ အထွေထွေ အတွင်း ရေးမှူးက မဇ္စျိမကို ပြောသည်။
at 3/14/2013 09:16:00 PM No comments:
မြင်းခြံ- မုံရွာ မှတဆင့် ငြိမ်းချမ်းရေး အတွက် ကချင်ပြည် လွတ်မြောက်ရေး အဖွဲ့ ထိန်းချုပ် နယ်မြေသို့ လမ်းလျှောက် ထွက်ခွာ လာကြသည့် ကိုသန့်ဇင်ဦး ဦးဆောင်သည့် ငြိမ်းချမ်းရေး အတွက် လမ်းလျှောက်လာသည့် အဖွဲ့သည် မတ်လ (၁၃) ရက်နေ့ နေ့လည် နှစ်နာရီတွင် လိုင်ဇာ မြို့သို့ စတင် ရောက်ရှိ လာပြီ ဖြစ်ကြောင်း ကချင် ကြိုဆိုရေး အဖွဲ့များမှ ပြောပါသည်။
“ဒီနေ့ ညနေ ၂ နာရီ လောက်မှာ သူတို့ အဖွဲ့တွေ ကျနော်တို့ လိုင်ဇာ မြို့ကို ရောက်ရှိ လာပါတယ်။ မနက် ၈ နာရီ အချိန်မှာ လဂျားယန် ဂိတ်ကနေ ဝင်ခွင့် ရပြီး တဖြည်းဖြည်း လမ်းလျှောက် ဝင်လာ ခဲ့ရတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ လိုင်ဇာမြို့ကို ဝင်ခွင့် ရရှိရေး အတွက် သူတို့က (၃) ရက်လောက် အစာ အငတ်ခံ ဆန္ဒပြခဲ့တဲ့ အတွက်ကြောင့် အားပြတ်လို့ပါ” ဟု ကြိုဆိုရေး အဖွဲ့ ဥက္ကဌ ဆလန် ကဘာ ဒွဲပီဆာ က ပြောပါသည်။
at 3/13/2013 08:16:00 PM No comments:
at 3/13/2013 08:10:00 PM No comments:
at 3/13/2013 08:09:00 PM No comments:
Wednesday, March 13, 2013 (ဧရာဝတီ)
နယ်စပ် ရွှေလီမြို့ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲကနေ ကချင်ပြည်နယ် လိုင်ဇာမြို့ ပြန်ရောက်သွားကြတဲ့ KIA/KIO ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကို ဒေသခံအများအပြားက ကြိုဆိုခဲ့ကြပါတယ်။
KIA ဒုစစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ဂွန်မော်က ဆွေးနွေးပွဲ အခြေအနေကို လိုင်ဇာမှာ ပြန်လည် တင်ပြခဲ့ပါတယ်။
KIA/KIO ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ လိုင်ဇာပြန်ရောက်ချိန် မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံတချို့ကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
(ဓာတ်ပုံများ - Maran Naw)
လိုင်ဇာမြို့ရှင်းလင်းပွဲ လုပ်ချိန်မှာ KIA က ထူးထူးခြားခြား ဘာတွေ ပြောသလဲ ဆိုတာ မသိရသေးပါဘူး။
at 3/13/2013 06:55:00 AM No comments:
မတ်လ ၁၁ ရက်နေ့က ထိုသို့တွေ့ဆုံပြီး သုံးသပ်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ရာတွင် ဆွေးနွေးပွဲကို ကမကထ ပြုပေးခဲ့သော အိမ်ရှင် တရုတ်နိုင်ငံမှ ကိုယ်စားလှယ်များ၏ ၀င်ရောက်စွက်ဖက်မှုကြောင့် ပူးတွဲ ကြေညာချက်တွင် ထည့်သွင်းနိုင်ခဲ့ခြင်း မရှိသော ကိစ္စရပ်များကို ဆက်လက် အကောင်အထည် ဖော်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်ဟု သိရပါသည်။
at 3/13/2013 06:45:00 AM No comments:
မကြာမီ ဖြေဆိုရမည့် ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ခုနှစ် အစိုးရစစ် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း စာမေးပွဲကို ကချင်လွတ်မြောက်ရေး အဖွဲ့ (KIO) ထိန်းချုပ် နယ်မြေရှိ (၁၀) တန်းကျောင်းသူ/ သားများသည် လုံခြုံရေးကြောင့် သွားရောက်ဖြေဆိုနိုင်အုံးမည်မဟုတ်သေးကြောင်း ဒုက္ခသည်တာဝန်ရှိသူများကပြောသည်။
at 3/12/2013 10:57:00 PM No comments:
at 3/12/2013 07:43:00 PM No comments:
at 3/12/2013 07:41:00 PM No comments:
at 3/12/2013 07:40:00 PM No comments:
ရွှေဟင်္သာသတင်းဌာန၊ မတ်လ ၁၂ ရက်နေ့
ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ (KIO)နှင့် အစိုးရအဖွဲ့တို့သည် တရုတ်နိုင်ငံရွှေလီမြို့ရှိ Jing Cheng ဟိုတယ်တွင် ယမာန် နေ့နံနက် ဒေသစံတော်ချိန် ၉နာရီခွဲမှ နောက်နေ့ မနက် တနာရီထိ ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်ဟု KIA အရာရှိတဦက ပြောပါ သည်။
“ အစည်းအဝေးအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားပေမဲ့ တချို့ကျတော့ ဗဟိုခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ အပြန်အလှန် တင်ပြရ တယ်လေ။
ဒီတော့ နေ့လည်စာထမင်းစားပြီးတဲ့အချိန်၊ အနားယူချိန်ကနေစပြီး အချိန်ယူလိုက်တာ ည (၉)နာရီ လောက်မှ အစည်းအဝေးပြန်စကြရတယ်လေ။ ကျနော်တို့က (၂)ရက်လောက်ဆွေးနွေးမယ်လို့ ရာထားပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့ အစိုးရဖက်ကတော့ တရက်ထဲအပြီး လုပ်မယ်ဆိုပြီး သဘောထားတော့ အချိန်နောက်ကျပြီးမှ ပြီးတာပေါ့” ဟုဆိုပါသည်။
at 3/12/2013 03:11:00 PM No comments:
at 3/12/2013 10:51:00 AM No comments:
ကချင်ပြည်နယ် ကေအိုင်အိုအစိုးရ တပ်မဟာ (၅) အုပ်ချုပ်နယ်မြေ ဖြစ်သော မြစ်ကြီးနား - လိုင်ဇာလမ်း လဂျားယန် မဆဲန့်ဘွမ်တွင် တပ်စွဲထားသော ဗမာစစ်တပ် ခလရ (၂၂၃) မှ မတ်လ (၁၀) ရက်နေ့ မနက် (၁၂း၃၀) နာရီခန့်တွင် ကေအိုင်အေရှေ့တန်း စခန်းဖြစ်သော ခဘွမ်ပိုစ့်သို့ (၆၀မမ) လက်နက်ကြီးဖြင့် (၂) ကြိမ်ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီး၊ ယိခူးပိုစ့် သို့လည်း (၄) ကြိမ် ပစ်ခတ်ခဲ့ယုံသာကမ၊ စက်သေနတ်များဖြင့် ပစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
ဗမာစစ်တပ်များသည် ကေအိုင်အိုအစိုးရနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးရန် အတွက်ပြင်ဆင်နေချိန်တွင် ယခုကဲ့သို့ ကေအိုင်အေ တပ်စခန်းများသို့ လက်နက်ကြီးများဖြင့် ပစ်ခတ်ခြင်း၊ ကေအိုင်အေ ထိမ်းချုပ်နယ်မြေများသို့ လက်နက်၊ ရိက္ခာနှင့် စစ်အင်းအားများ ပို့ဆောင်ခြင်းများကို အဆက် မပြတ် လုပ်ဆောင်နေခြင်းသည် ငြိမ်းချမ်းရေးကို ပိုမိုအလှမ်းဝေးစေ ကြောင်း ဒေသခံပြည်သူများမှ စိုးရိမ်လျက်ရှိကြောင်း သိရှိရပါသည်။
at 3/12/2013 10:44:00 AM No comments:
ကချင်ပြည်နယ် ကေအိုင်အိုအစိုးရ အရှေ့ပိုင်းတိုင်း တပ်မဟာ (၁) အုပ်ချုပ်နယ်မြေဖြစ်သော ကေအိုင်အေ တပ်ရင်း (၂၁) ဒေသ၊ ကချင်နှင့် တရုတ်ပြည်နယ်ခြားမှတ်တိုင် (၄၃) ဘက်သို့ ထိုးစစ်ဆင်လာသော မုဘွမ် အခြစိုက် ဗမာစစ်တပ် ခမရ (၄၃၇) နှင့် ကေအိုင်အေ မျိုးချစ်ရဲဘော်များ မတ်လ (၉) ရက်နေ့ မနက်ပိုင်း (၇း၅၀) နာရီခန့်တွင် တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ ဗမာစစ်တပ်ဘက်မှ လက်နက်ကြီးများ ဖြင့် ကေအိုင်အေတပ်စခန်းရှိရာသို့ ပစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်း ဆက်လက် သတင်းရရှိပါသည်။
at 3/12/2013 10:43:00 AM No comments:
at 3/12/2013 10:42:00 AM No comments:
at 3/12/2013 10:40:00 AM No comments:
ကချင် လွတ်မြောက်ရေး အဖွဲ့ (KIO)နှင့် အစိုးရ အဖွဲ့တို့သည် တရုတ်နိုင်ငံ ရွှေလီမြို့ရှိ Jing Cheng ဟိုတယ်တွင် ယနေ့ နံနက် ၉နာရီတွင် စတင် တွေ့ဆုံဆွေးနွေး ခဲ့ကြသည်ဟု KIA အရာရှိတဦက ပြောပါသည်။
ယင်းဆွေးနွေးပွဲတွင် ဦးစွန်လွတ်ဂံ ဦးဆောင်သည့် KIO ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ဝင် ၁၁ ဦးနှင့် ပြည်ထောင်စု လုံခြုံရေး ၀န် ကြီး ဦးအောင်မင်း ခေါင်းဆောင်သော အဖွဲ့ဝင် (၁၉)ဦး တို့ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေး ခဲ့ပါသည်။
at 3/11/2013 04:25:00 PM No comments:
at 3/11/2013 04:23:00 PM No comments:
at 3/11/2013 04:22:00 PM No comments:
Wunpawng Mungdan Shanglawt Asuya KIO/KIA magam Du Salang ni hte myen asuya Salang ni March (11) ya jahpawt hkying (9:30AM) te kawn Miwa Mung, Shweli Mare na Jing Cheng Hotel kaw hkrum zup bawngban nga sai lam shiga na chye lu ai. KIO Asuya kawn Sara Kaba Sumlut Gam woi awn nna, Du Kaba Gun Maw, Du Kaba Zau Raw, Slg. Kaba Hkun Nawng, Tara Salang Lahpai La, Du Kaba Hkun Nawng, Simsa Lam Bawngban Hpung Malawm ni sa du shang lawm nna, myen asuya maga na U Aung Min woi awn let Du Bomhu Chyuk Myit Soe hte laga salang ni sa du shang lawm bangban nga ai lam hpe na chye lu ai. N dai bawngban hpawng hta lahkawng maga na hpyen masa hte seng ai ni sa du shang lawm ai hpe chye lu nna, madung hku nna hpyen masa hte seng nna bawngban mat wa na re lam buga masha ni kawn tak sawm maram nga ma ai lam na chye lu ai.
at 3/11/2013 02:16:00 PM No comments: